Dheuteronomi 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Zvisingafaniri kuitwa pakuchema vakafa (1, 2)
Zvekudya zvakachena nezvisina (3-21)
Chegumi chaJehovha (22-29)
14 “Muri vanakomana vaJehovha Mwari wenyu. Musazvicheka-cheka+ kana kuzviveura pahuma dzenyu nekuda kwemunhu akafa.+ 2 Nekuti muri rudzi rutsvene+ kuna Jehovha Mwari wenyu, uye Jehovha akakusarudzai kuti muve rudzi rwake, pfuma yake yaanokoshesa, pakati pemarudzi ese ari panyika.+ 3 “Usadya chinhu chese chinosemesa.+ 4 Idzi ndidzo mhuka dzamunogona kudya:+ mombe, gwai, mbudzi, 5 nondo, mhara, mhembwe, mbudzi yemusango, mharapara, gwai remusango, negwai remumakomo. 6 Unogona kudya mhuka yese ine mahwanda* akaparadzana nepakati uye inodzeya. 7 Asi haufaniri kudya mhuka idzi dzinodzeya kana kuti dzine mahwanda akaparadzana: ngamera, tsuro, nembira, nekuti dzinodzeya asi hadzina mahwanda akaparadzana. Hadzina kuchena kwauri.+ 8 Uyewo nguruve, nekuti ine mahwanda akaparadzana asi haidzeyi. Haina kuchena kwauri. Usadya nyama yadzo kana kudzibata kana dzafa. 9 “Unogona hako kudya izvi, pazvinhu zvese zvinogara mumvura: Unogona kudya chero chinhu chine zvimbi* nemakwati.+ 10 Asi usadya zvinhu zvese zvisina zvimbi nemakwati. Hazvina kuchena kwauri. 11 “Unogona hako kudya shiri yese yakachena. 12 Asi haufaniri kudya idzi: gondo, hungwe, gora dema,+ 13 ngavi tsvuku, ngavi nhema, marudzi ese eruvangu, 14 marudzi ese emakunguo, 15 mhou, zizi, shiri yemugungwa, marudzi ese erukodzi, 16 zizi diki, zizi rine nzeve refu, dhadha remutsipa murefu, 17 dhadha remuromo murefu, gora, shambira, 18 shuramurove, marudzi ese eshorechena, mhupupu, nechiremwaremwa. 19 Zvisikwa* zvese zvine mapapiro zvinofamba zvakawanda hazvinawo kuchena kwauri. Hazvifaniri kudyiwa. 20 Unogona hako kudya zvisikwa zvese zvakachena zvinobhururuka. 21 “Haufaniri kudya mhuka yakafa yega.+ Unogona kuipa mutorwa ari mukati memaguta* ako, uye anogona hake kuidya, kana kuti inogona kutengeserwa mutorwa. Nekuti uri rudzi rutsvene kuna Jehovha Mwari wako. “Usabika mbudzana nemukaka waamai vayo.+ 22 “Unotofanira kupa chegumi chezvibereko zvako zvese zvembeu yaunodyara mumunda gore negore.+ 23 Chegumi chezviyo* zvako, chewaini yako itsva, chemafuta ako, nemombe dzako nemakwai zvinotanga kuberekwa, uchazvidyira pamberi paJehovha Mwari wako munzvimbo yaanosarudza kuti zita rake rigare,+ kuti udzidze kutya Jehovha Mwari wako nguva dzese.+ 24 “Asi kana nzvimbo inosarudzwa naJehovha Mwari wako kuti aise zita rake+ ikakuitira kure, rwendo rwacho rwakakurebera uye usingakwanisi kuchitakura kuenda ikoko (nekuti Jehovha Mwari wako achakukomborera), 25 unogona kuchitengesa, wouya wakabata mari yacho kunzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako. 26 Unogona kushandisa mari yacho kutenga chero chaunoda:* mombe, makwai, mbudzi, waini, zvimwe zvinwiwa zvinodhaka, nezvese zvaunoda;* uye uchadyira ipapo pamberi paJehovha Mwari wako wofara, iwe neimba yako.+ 27 Uye usakanganwa muRevhi ari mumaguta ako,+ nekuti haana mugove kana nhaka pamwe chete newe.+ 28 “Panopera makore matatu ega ega, unofanira kuuya nechegumi chese chezvibereko zvako zvegore iroro, wozviisa mukati memaguta ako.+ 29 MuRevhi, uyo asina nhaka kana mugove pamwe chete newe, mutorwa, nherera, nechirikadzi vari mukati memaguta ako, vachauya, vodya voguta,+ kuti Jehovha Mwari wako akukomborere pane zvese zvaunoita.+
^ Iyi itsoka yakaomarara yemhuka dzakadai semombe nembudzi.
^ Izvi zviminzwa zvinenge zvakabudikira kumativi, pamusana, nekubesu rezvisikwa zvakadai sehove.
^ Kana kuti “Zvipukanana.”
^ Kana kuti “chero chinodiwa nemweya wako.”
^ Kana kuti “nechero chingakumbirwa nemweya wako.”